31 / 08 / 2020 29 / 07 / 2021 ရော့ Paton 4598 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, လမ်းဆုံလမ်းခွ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်
75978 ထောင့်ဖြတ် Alley အခြားအဘယ်သူမျှမကဲ့သို့ဖြစ်၏ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ထူးကဲကြီးမားသောအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်အောင်မတိုင်မီလာခဲ့သော set Lego အစုံ
2018 ခုနှစ်တွင်အုတ်ကမ္ဘာသို့၎င်း၏ပြန်လာမှတ်သားသောအစုံ၏ပထမလှိုင်းကနေ, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ လျင်မြန်စွာတစ် ဦး အဖြစ်က၎င်း၏အရပ်ဌာနကိုတွေ့ခဲ့သည် Lego အဓိက ဦး စားပေးကဏ္ areas နှစ်ခုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အုပ်စု၏ ဦး ဆောင်ခေါင်းစဉ်များ။
ဇာတ်ကောင်များနှင့်ဇာတ်ကောင်များကိုဒီဇိုင်းကိုလွယ်ကူစွာမောင်းနှင်နိုင်ခြင်း၊art အားလုံး authenti ဖမ်းယူအဆောက်အ ဦ နည်းစနစ်city အသေးစိတ်ကျသောထူးခြားသော minifigure ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာ့တည်ဆောက်သူကိုချက်ချင်းမြှုပ်နှံနိုင်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ.
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စ၍ ထုတ်လွှင့်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကြည့်ပြီးမည်သည့်ရုပ်ရှင်နှင့်စာအုပ်လဲမဟုတ်၊art ကပြောပြတယ်ဇာတ်လမ်း၏။ အတွင်းပိုင်းရှိထိုကဲ့သို့သောပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအလွှာများကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အစွမ်း Lego အစုံသည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ပုံပြင်၊ ဇာတ်ကောင်နှင့်တည်နေရာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ ဂိမ်းအဖြစ်နှင့်၎င်း၏လူကြိုက်များမောင်းနှင်ရန်ဆက်လက်။
အစုံအတွင်းပုံပြင်ပြောခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဂရုတစိုက်ချဉ်းကပ်ပုံသည်ဒုတိယအကြိမ်တွင်ထပ်တူထပ်မျှအရေးပါသည် ဟယ်ရီပေါ်တာ ထံမှအာရုံ၏နောက်ထပ်သော့ချက်areaရိယာနှင့်အတူလိုင်စင် Lego အုပ်စု - စမ်းသပ်ဖို့။ အလွန်သေးငယ်သောအသေးစားပုံသဏ္setsာန်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူခေါင်းစဉ်သည်ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားသောနေရာများသို့စွန့်ခွာပြီးတစ်မူထူးသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မြင်နိုင်သောမိုက်ခရိုစကုပ်ကိုထုတ်လုပ်သည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်နှင့်သတ္တဝါ -based အစုံသောစက်မှုအံ့သြစရာ ၇၅၉၇၉ Hedwig။ အယူအဆသစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးအချို့ဖြစ်ခဲ့သည် Lego လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကပင်ခေါင်းစဉ်အားလုံးထဲမှထွက်လာရန်အစုံလိုက် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ.
ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုလုံးသည်ဤရှုထောင့် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ပုံပြင်များဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသောပုံစံနှင့်ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်သောအယူအဆများကိုထင်ဟပ်ပြသသည်မဟုတ်ပါ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, ဒါပေမယ့်လုံးဝနှုတ်ဆက်ပြီး။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်သာမကစာအုပ်များနှင့်ရုပ်ရှင်များ၏အထင်ကရလျှို့ဝှက်ချက်လန်ဒန်တည်နေရာမှထင်ရှားသောဆိုင်များတွင်တစ်ခုလုံးကိုဖမ်းယူသည်။ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley ယခင်ကမမြင်နိုင်လောက်အောင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိပြီး၎င်းမှပင်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်သောအတိုင်းအတာဖြင့်၎င်း၏အရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းနက်ရှိုင်းစွာနစ်မြုပ်သည် Lego ကုမ္ပဏီ၏လတ်တလောစံနှုန်းများ။
theme: Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အမည်သတ်မှတ်မည် - 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley ဖြန့်ချိ: စက်တင်ဘာလ 1
စျေးနှုန်း: £ 369.99 / $ 399.99 / € 399.99 အပိုင်းပိုင်း: 5,544 အသေးစားပုံများ: 14
5,544 အပိုင်းပိုင်းမှာလာမယ့်, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley သာဒုတိယဖြစ်ပါတယ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အပိုင်းအစမှရေတွက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် ပေါင် ၂၀ ပိုများသည့်အတွက်ယခုအခင်းအကျင်း၏သမိုင်းတွင်ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ထို ၂၀၁၈ ကုမ္ပဏီကြီးကဲ့သို့ပင် ၇၅၉၇၈ အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်ကျယ်ပြန့်သည်။
သို့သော် Diagon Alley သည်၎င်း၏အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းနှင့်မော်ဒယ်တွင်ပါ ၀ င်သောစျေးဆိုင်များစွာနှင့်အတူ၎င်းသည် ပို၍ များသော comp ဖြစ်သည်artစိတ် ၀ င်စားမှုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်၊ သင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှစျေး ၀ ယ်ခြင်းသို့သွားစဉ်၊ နောက်လာမည့်ရှေ့သို့မသွားခင် 32x 16 baseplate ကို ဖြတ်၍ မှော်အကြောင်းအရာဆိုင်များကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုပြီးအောင်လုပ်သည်။ သီးခြားတည်ဆောက်လေးခုမှတစ်ခုစီသည်ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင်လာသည်။ အကြီးစားမော်ဂျူလာအဆောက်အ ဦး များနှင့်ဆင်တူသည် Creator Expert ဆန့်ကျင်ဖက်အဖြစ်, တစ် ဦး fascia ရှေ့နှင့်ပွင့်လင်းနောက်ကျောချဉ်းကပ်မှုယူ။ Diagon Alley ပိုမိုအစုံအတွင်းတည်ဆောက်ထားရန်ခွင့်ပြုကြောင်းဆိုသော်ငြားလိုင်း Creator Expert's တံခါးပိတ်အရုပ်အိမ်ချဉ်းကပ်။
Diagon Alley ၏စျေးဆိုင်များအကြား၊ ပုံပြင်၊ ဒီဇိုင်းနှင့်အရောင်အဆင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသောအဆောက်အ ဦး သည် ၇၅၉၇၈ ကိုတည်ဆောက်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းအစားအိတ်များမှအိတ်များနှင့်စျေး ၀ ယ်ခြင်းများအထိထူးခြားသောအရသာနှင့်အတွေ့အကြုံများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley ပိုမိုကြီးမားသောနီးပါးကွဲပြားခြားနားသောအစုံလေးခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အလွန်တူသည်ဟုခံစားရပြီးအလွန်ကြီးမားသောပေါင် ၃၆၉.၉၉ သေတ္တာ။
ဤအစုများထဲမှပထမတစ်ခုမှာ Ollivander ၏ Wand ဆိုင်နှင့်အနီးအနားရှိ Scribbulus ဖြစ်သည်။ အိတ်၏ပထမစုံတွဲမှအောက်ပိုင်းအဆင့်အတွင်းပိုင်းနှင့် Diagon Alley တစ်လျှောက် cobbled လမ်းစွန်းကိုအတူတကွစုစည်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်မော်ဒယ်သို့အလုပ်လုပ်ခဲ့လျက်ရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ 'ဘီစီ ၃၈၂ မှ စ၍ ကောင်းမွန်သောလှံတံများပြုလုပ်သူများ' ဟူသောအမှတ်အသားဖြင့်တံခါး၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်လှပသောကွေးနေသောအပြင်ဘက်ပြတင်းပေါက်များမှပြတင်းပေါက်များသေတ္တာများပေါ်ရှိသေတ္တာများကိုထုတ်ဖော်ရန်ထွက်လှည့်သောအတွင်းလှေကားအထိ - Ollivander's partစာအုပ်ဖတ်တာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေကနေ icular ဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အုတ်ပုံစံနဲ့ဖမ်းမိတယ်။
Ollivander နှင့် Scribbulus တို့မှရရှိသောအရည်အသွေးသည် Quidditch Supplies နှင့် The Daily Prophet သို့ဝင်ပေါက်လေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ QQS ၏စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသောအပြင်ဘက်အလင်းရောင် Lego ပုံစံသည်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၏တိကျမှန်ကန်မှုအပေါ်ထင်ဟပ်မှုအားရောင်ပြန်ဟပ်။ သိမ်မွေ့။ သိမ်မွေ့သောတည်ဆောက်ပုံကိုဖုံးကွယ်ထားပါသည် - ဆိုင်၏မျက်နှာစာသည်အနည်းငယ်အနည်းငယ်ထောင့်တည့်မတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်မည်သို့အောင်မြင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မဖျက်ဆီးနိုင်ပါ။ သို့သော်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသောအရာတစ်ခုသည်သင်ရှေ့တွင်ရှိသောပန်းရောင်နှင့်အနီရောင်အရောင်အဆင်းထက် ကျော်လွန်၍ သင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်း၌အရည်အသွေးရှိသော Quidditch Supplies 'p ကိုကျွမ်းကျင်စွာဖမ်းယူနိုင်သောကြမ်းပြင်နှစ်ခုရှိသည်artQuidditch ဂီယာရှိ mannequins များပြသသည့်အနေဖြင့်ဟယ်ရီနေစဉ်အတွင်းစွဲလန်းနေသောပြတင်းပေါက်ရှိ Firebolt အထိ icular layout ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Azkaban ၏အကျဉ်းသားသည် ၀ တ်စုံကိုင်ထားသောစာအုပ်စင်များနှင့်တံမြက်စည်းများခင်းကျင်းပြသထားသည့်အောက်၌ကျွန်ုပ်တို့၏တံမြက်စည်းများကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စမ်းသပ်နိုင်သည်။
တံခါးပေါက်တွင် Florean နှင့် Blott တို့ဖြစ်ပြီး Florean Fortescue ၏ရေခဲမုန့်ဆိုင်သည်artစာအုပ်၏စာအုပ်သည်ဒုတိယလက်ကိုင်စာအုပ်ဆိုင်ဘေးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Flourish and Blotts သည် Harry သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးဒုတိယနှစ် Defence the the Dark နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် Artပါမောက္ခ - နှင့်ကျော်ကြား wizard ကိုစာရေးဆရာ - Gilderoy Lockhart (နှင့်မကြာမီဘယ်မှာပြီးနောက် Arthur Weasley နှင့် Lucius Malfoy ဒဏ်ခတ်လာ) ။ စတိုးဆိုင်၏နံရံများသည်စာအုပ်များဖြင့်စီတန်းထားသည်။ ပါမောက္ခသည်စားပွဲခုံတွင်ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိမိတ္တူများကိုလက်မှတ်ထိုးသည်။ ဒါဟာမြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့်အတွင်းပိုင်းဒါရိုးရှင်းစွာနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာဖမ်းမိ Lego တည်ဆောက်, အနည်းငယ် sm ကျေးဇူးတင်ပါတယ်art စာအုပ်များအတွက်နည်းစနစ်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတွင်းပိုင်း၏မှေးမှိန်သောအလင်းရောင်ကိုထင်ဟပ်စေရန်အရောင်သုံးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်အိမ်ရှေ့တံခါးရှိရေခဲမုန့်ဆိုင်၏တောက်ပသောအရောင်များကိုတွေ့ရပြီးဟယ်ရီသည်မနက်ခင်းတိုင်းနီးပါးနှစ်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Azkaban ၏အကျဉ်းသား။
၏စတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံး baseplate တည်ဆောက် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley Weasley အမွှာ 'ဟာသဆိုင် Weasleys' Wizard Wheezes သည်အရောင်တောက်တောက်နှင့်မြင့်မားသောအဆောက်အအုံဖြစ်ပြီးနံပါတ် ၉၃ Diagon Alley တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့်ဖီးနစ်၏အမိန့်။ ဖရက်နှင့်ဂျော့ခ်ျ၏ထူးခြားသောအမည်ဖြင့်ထုတ်ကုန်များစွာသည်ထူးခြားသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်အတူအံ့အားသင့်ဖွယ်လက္ခဏာများနှင့်ပြသမှုများအတွက် ၄ င်း၏ရုပ်ရှင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး၎င်းအမြောက်အများကိုဤတွင်စတစ်ကာနှင့်အုတ်ပုံများဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ စာအုပ်နှင့်ရုပ်ရှင်၏တည်နေရာနှင့်eအတွက်လည်းတူညီသောဂရုစိုက်မှုနှင့်အချစ်များစွာကိုအချိန်ကုန်သက်သာစေသည်xtravagant ဆိုင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းယင်း၏ထဲသို့သွင်းထားသည် Lego ဒီဇိုင်း။
ပြီးစီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သီးခြားတည်ဆောက်မှုလေးခုနှင့်အတူတကွသော့ခတ်ထားနိုင်သည် နည်းပညာ Diagon Alley ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျား။ အရွယ်အစားကြီးမားသည့်အပိုင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ (သူတို့နှစ်ခုနှင့်နှစ်ခု၊ နောက်ကျောနောက်ကျောထည့်နိုင်သည်) ဒီနောက်ဆုံးတည်ဆောက်မှုပုံစံလေးခုရဲ့ရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာအင်္ဂလိပ်ရှေးဟောင်းမြို့တော်အဖြစ်လှုပ်ရှားမှု၊ အရောင်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များပါဝင်တဲ့လမ်းတစ်ခုရှိတယ်။ architecture သက်တမ်းအရင့်အုတ်များ၊ သစ်သားဘောင်များ၊ သံထည်နှင့်ဖန်မျက်နှာပြင်များကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအုတ်ပုံစံဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ပြီးတော့လမ်းရဲ့နောက်ဘက်ခြမ်းမှာဆိုင်အတွင်းပိုင်းတော်တော်များများဟာပြည့်နှက်နေပြီးပုံပြင်တွေနဲ့ပြည့်လျှံနေတယ်။art တည်နေရာတစ်ခုချင်းစီ၏အရောင်များကိုရှူရှိုက်မိစေရန်နှင့်အသေးစားရုပ်ပုံတစ်ခုထက် ပို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်နေရာအလုံအလောက်ပေးခြင်းနှင့်မျှတမှုမရှိသောစတစ်ကာများပေါ်တွင်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း။
14 minifigures (နှင့်ပိုကြီးတဲ့ပုံ Hagrid) နှင့်အတူပါဝင်သည် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alleyဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် Diagon Alley ရှိအလယ်တန်းတောက်ပသောစာလုံးများကိုပေါင်းစပ်ရန်လုံး ၀ သီးသန့်သီးသန့်ထားရှိရန် (Bar Hagrid) သို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းတွင်အသစ်ထည့်သွင်းရန်အခွင့်အရေးကိုနှစ်သက်သည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ထိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ line-up တစ်ခုလုံးသည်ထူးခြားသောအသေးစားပုံစံများဖြစ်သည်။
စုဆောင်းခြင်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာဆက်စပ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်ကျွန်တော်ပြောနေစဉ်၎င်းသည်ခိုင်မာပြီးတသမတ်တည်းအဖြစ်သူ့ဟာသူပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် Lego ဆောင်ပုဒ် minifigure ရွေးချယ်မှုအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည် - သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအစုံအတွက်ပေါ်လာဖို့ညာဘက်ဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ခြင်း။ ၎င်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီခဲ့သည်။ minifigure တိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ မည်သည့်နေရာတွင်ဝတ်ဆင်ရမည်ကိုကျွမ်းကျင်သောရွေးချယ်ခြင်းသည်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ချင်း၏အသွင်အပြင်၊ တည်နေရာ၊art အစုအတွင်းမှာပြောသည်ခံရပုံပြင်၏။
ဤသည်တွင်ထည့်သွင်းရွေးချယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်။ ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, မသူတို့ကိုဒီဇိုင်း၏စံချိန်စံညွှန်းအတွက်။ အစောပိုင်းနှစ်များတွင်ဇာတ်ကောင်အများစု၏ဗားရှင်းများမှ - Hagrid နှင့် Harry နှင့်အတူ ဦး ဆောင်သော - ၏ Weasley အမွှာအထိ ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Phoenix ၏အမိန့်, minifigure တိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတစ်လျှောက်, ဒီအစုံအတွင်းနေအိမ်, အခန်းကဏ္ and နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ် ဟယ်ရီပေါ်တာ ပုံပြင်လည်း။ ဒါကစစ်မှန်သည်city စာအုပ်ဒီဇိုင်းများနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်ပါ ၀ င်ဖော်ပြချက်များမှတိုက်ရိုက်ယူဆောင်လာခြင်းကြောင့်၎င်းဒီဇိုင်းများသည်၎င်းတို့အတွင်းရှိတည်ဆောက်မှုများ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းအစများဖြစ်သည်။ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, သင်ချက်ချင်းပြန်ဇာတ်လမ်း, မြင်ကွင်းတစ်ခုအဘို့အမြင်ကွင်းတစ်ခု, စာမျက်နှာစာမျက်နှာ။
ဟယ်ရီပေါ်တာ Diagon Alley ရှိခဲ့သောစာအုပ် (၇) အုပ်နှင့်ရုပ်ရှင်ရှစ်ခုတွင်ပြသမှုများပြားလွန်းသောကြောင့်စိတ်ထဲပေါ်လာသည့်ပျောက်ဆုံးနေသောဇာတ်ကောင်အနည်းငယ်ရှိနိုင်သည်ဆိုလျှင်ပင်ပရိသတ်များကထပ်မံတောင်းခံနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ တစ် ဦး မျှော်လင့်အခြားမည်သူမဆိုခဲ့သည် Lego Self- နှိုးဆွသောခွက်နှင့်အတူမှ Ian ဘရောင်းအသေးစား? ဒီတစ်ခါလည်းစီးရီး3ဟယ်ရီပေါ်တာ စုဆောင်းထားသောအသေးစား ဒါကိုပို့ပေးနိုင်တယ်…
2018 ရဲ့နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်အလွန် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် တည်ဆောက်ပုံ၊ ဇာတ်လမ်း၊ 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley သင်လိုချင်တာအားလုံးကိုပေးသည်နှင့်အလားတူ stratospheric စျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့အများစုဟာလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အစုမဟုတ်ဘူး Lego စတိုး ချက်ချင်း ၀ ယ်လျှင်ချက်ချင်း ၀ ယ်ယူနိုင်သည်၊ သို့သော်ချွေတာရန်အတွက်သိုလှောင်ရန်၊ တစ်နှစ်လုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုမူရန်၊ ကားကိုအဆင့်မြှင့်ရန်သို့မဟုတ်အဝတ်လျှော်စက်ကိုအစားထိုးရန်မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်။
တလုံးထဲထည့်ဖို့ငွေအများကြီးပဲ Lego သတ်မှတ်ထားပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်၌သင်၌ ၀ င်ခဲ့ကောင်းမျှော်လင့်နိုင်သမျှအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီအစုကိုဝယ်ပြီးတည်ဆောက်နိုင်သည့်ကံကောင်းသူများအတွက်နောင်တရစရာမရှိပါ။ အားလုံးအတူတကွပေါင်းသောအခါတစ်မီတာအကျယ်ကျော်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအတွက်နေရာလွတ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အစာရှောင်ခြင်း၏တ ဦး တည်းဖြစ်လာနေသည် Lego တည်ဆောက်သူများသည်စာအုပ်များနှင့်ရုပ်ရှင်ကားများသို့ချက်ချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာရာတိုင်းကိုဂုဏ်ပြုသောအစုရှယ်ယာများဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် Group ၏အစဉ်အဆက်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်သောအကြောင်းအရာများ။ နှင့်တည်ဆောက်ခြင်း 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley ကွဲပြားခြားနားသည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်နက်ရှိုင်းသောစာအုပ်များအားပြန်လည်ဖတ်ရှုခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လူသိများသောပုံပြင်များ၊ မြင်ကွင်းများနှင့်အခန်းကြီးများနှင့်ဤတည်နေရာဘဝနှင့်၎င်း၏ဇာတ်ကောင်များကိုထူးခြားသောပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှုများနှင့်အမှတ်ရစရာတွေ့ဆုံခြင်းများကိုပြန်လည်ပြောပြခြင်းဖြစ်သည်။
In ဟယ်ရီပေါ်တာJK Rowling သည် Diagon Alley သို့ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ခြင်းသည်ထိုနေရာ၏လှုပ်ရှားမှု၊ ဘဝနှင့်လေထုအခြေအနေကိုဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲတည်နေရာအားဆက်လက်ကစားမည့်ဇာတ်ကောင်နှင့်ဇာတ်လမ်း၏အရေးပါမှုကိုထင်ဟပ်စေသည်။ အရေးကြီးတာက - တစ်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောစျေးနှုန်းမှာ Lego set - 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley Diagon Alley ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောစတိုးဆိုင်များအဖြစ်သစ္စာရှိရှိပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရုံသာမကအုတ်တိုင်းအတွင်း၊ ဆိုင်တိုင်းပြတင်းပေါက်နောက်ကွယ်နှင့်တံခါးပေါက်များအားလုံး၏တူညီသောစရိုက်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းပြန်လည်တွေ့ရှိသည်။
ဒီဇိုင်း၏ရှုထောင့်တိုင်းကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားသည်၊ အုတ်အားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ကောင်များနှင့်တည်နေရာနှင့်ပတ်သက်သောဖြစ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားသည် 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley။ နညျးလမျးမြားစှာမှာ, ကအခြားအများကဲ့သို့ပါပဲ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၎င်းကိုရရှိရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသော်လည်းအမှန်တကယ်ကြီးမားပြီးထူးခြားသည့်အတိုင်းအတာဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအလုပ်ကိုထောက်ပံ့ပါ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် Lego at LEGO.com ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ် ဦး မှတဆင့်မှတဆင့်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ. 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley ပေါင် ၃၆၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၃၉၉.၉၉ / ယူရို ၃၉၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချထားပြီးစက်တင်ဘာ ၁ ရက်အင်္ဂါနေ့မှစတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ် Brick Fanatics'' ထိပ်ဆုံး LEGO သတ်မှတ်ချက် 20 စာရင်း.
← LEGO Harry Potter ၇၅၉၇၈ Diagon Alley ကိုပြသခဲ့သည်
Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 75978 Diagon Alley gallery →